> Resource > Android > Manager Top 5 Android Music
Android jeestay baxay inuu tartan ugu sareeya ee suuqa mobile. Ku dhowaad dhammaan qalabka cusub ee soo socda suuqa waxaa preloaded la Android. Cajiib ah android waa dhab ahaantii ay sabab u tahay user-saaxiibtimo. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad maamuli files ee aad taleefan fudayd. Item gallery A waa u fududahay in la maareeyo oo sidaas waa in ay maareeyaan music on android.
Waxaa jira codsiyo kala duwan ee suuqa taas oo u adeegi kartaa maamulaha music sida Android. Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah codsiyada sare qiimeeyo. Fadlan akhri oo ku doorato mid ka mid ah ugu fiican in la isticmaalo.
1. Tababaraha music Android - DoubleTwist
DoubleTwist waa codsi kama dambaysta ah oo kuu ogolaanaya in aad u hagaagsan playlists aad, dhammaan faylasha iyo music videos ka Lugood in qalab Android aad la qasabno oo kaliya dhowr, iyo iyaga oo sidoo kale ka ciyaaro. Waa ciyaaryahan oo dhan-in-mid podcast, raadiyaha iyo music ah, aad nafaha oo dhib ku ah ilaalinta Chine gaar ah syncing iyo dhagaysiga muusigga iyo raadiyaha.
Music, playlists, iyo video syncing.
Kaalaya oo la dhisay-in radio sixir.
Music ciyaaryahan la smart playlist.
Bixi la Airplay ku hadla WiFi.
2. AirDroid - Tababaraha kooxda muusikada ee Android
AirDroid waa tababare music degdeg ah oo ku haboon, waayo, Android u wareejinta ringtones, sawiro, videos, iyo wax kasta oo kale oo ku saabsan files iyo off Android. Iyadoo codsigan aad ka heli buuxda gacanta aad music fog. Waxay kuu ogolaanaysaa user in Falanqeynta, soo dejinta ama dhoofinta music, iyo music dhigay ringtone ka browser web ah.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh, soo dejinta ama music dhoofinta.
Delete music aan la rabin.
Music Set sida ringtone ka web browser ah PC ee.
3. Mobogenie - qalab maamulka music Android
Mobogenie waa codsi weyn ee maaraynta music qalabka Android. Waa inay si toos ah u sahamiyaan music cusub oo soo bixi, dejinta, songs dhoofinta, ringtones iyo videos PC. Waxaa sidoo kale la yimaado ciyaaryahan music dhisay-in. Intaa waxaa dheer, waxa ay bixisaa suuqa taas oo kuu oggolaanaysa in aad ka heli, download, soo dejinta / dhoofinta songs, ringtones iyo videos.
Raadi music dhawaan.
Download music, ringtones iyo wallpapers si toos ah.
Waxaa la dhisay-in ciyaaryahanka music.
4. Mobisynapse - Tababaraha music ee telefoonada Android
Mobisynapse waa utility a free Android loo isticmaalo syncing music u dhexeeya phone Android iyo PC ah, iyo syncing playlists la Lugood. Waxaa maamulka maktabadda music ah iyo syncing aad. Sidoo kale kasoo muuqan doorasho gurmad aad content warbaahinta oo dhan.
Nidaameed music iyo warbaahinta kale waxay u dhexeeya telefoonka aad Android iyo PC.
Hagaagsan playlists la Lugood.
Kaabta iyo soo celinta warbaahinta (music & videos) files.
5. Wonderhsare MobileGo for Android - Tababaraha music desktop Android
Wondershare Mobile Tag for Android (Win) waa mid ka mid ah tababarayaasha ugu fiican music android. Waa doorasho weyn ee dadka qaba ula dhacsan ee degsado MP3 heeso cusub oo ka Wontube iyo bogag badan oo music. Waxaad dib kartaa files music oo ku soo celiyo mar kasta oo aad rabto. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad u hagaagsan playlists dhexeeya phone Android ama kiniin iyo Lugood. Intaa waxaa dheer, waxa ay u fasaxaya isticmaala si loogu badalo iyo music dejinta inay qaab Android ka filaayo.
Download MP3 cusub iyo heesaha.
Hagaagsan playlists ka Lugood Library, iyo qeybsanaan.
Bedelka music dhexeeya qalab Android iyo kombiyuutarka.
Kaabta music iyo playlists oo u celinaynaa fudayd.
Beddelaan music si ay Android taageeray qaabab.
Calan aad song doonayo sidii ringtone.
Dadka isticmaala Mac, waxaad isku dayi kartaa Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) , oo ah tababaraha music Android u Mac.
Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaatid oo ku saabsan Samsung Manager Connection